China Factory Bulk Mink Eyelashes Vendor 3D Lashes ine Yakavanzika Label Eyelashes Bhokisi fekitori uye vagadziri | Weiti
Factory Bulk Mink Eyelashes Vendor 3D Lashes neyakavanzika Label Eyelashes Bhokisi
1, DONNA maitiro mink eyelashes
2, 14mm echisikigo akapfava maronda
3, OEM & ODM sevhisi yakapihwa
4, Yakakura yakagadzirira stock yekutengesa
√Kalocils 3D mink lashes akagadzirwa ne100% chaiyo mink bvudzi, anodurura kubva kumaminks 'echisikarudzi anodonha bvudzi, uye akagezwa. Hatife takakuvadza mhuka! Yedu mink eyelashes ndeye hypoallergenic, isina makemikari, haikuvadze maziso ako.
√Aya mink eyelashes anoitwa nemaoko nenyanzvi. Basa rakakura pamatanho uye wispy maronda. Dhizaini chaiyo ye3D, ine yakasarudzika yakasikwa yakatetepa uye yakakombama, mhedzisiro yemasikisi akasiyana. Fluffy uye inoshamisa asi yakasikwa kutaridzika. Inoita kuti uve wakajeka, kupenya, kupenya, uye kunakidze.
√Aya maronda enhema akareba uye makobvu, unogona kutapudza hurefu zvinoenderana nezvaunoda. Arison 3D mink lashes inoshandiswazve, inogona kushandiswa kanopfuura ka15 pasi peyakajairika mamiriro. Nyore Kunyorera, hazvisi nyore kudonha. Yakakura kune nyanzvi kana kungotanga.
√Iyi eyelash yekunyepera haina kureruka uye yakapfava, haugone kana kunzwa huremu hwayo kana iwe ukaipfeka. Inonyaradza hupenyu hwezuva nezuva, basa, kana kuenda kupati. Zvinozoita kuti meso ako apenye. Iyi zvakare yako yakanaka chipo sarudzo.
Pashure: OEM 3D Eyelashes Mink Lashes Yakagadzirwa nemaoko Makeup Yakazara Strip Lashes
Zvadaro: Wepamusoro Quatity Yakagadzirwa nemaoko Firipi Strip 3D 14mm Yakasimba Wholesale Mink Lashes
Vatengesi ve Eyelash
rakavanzika chitaridzi eyelash bhokisi
Gadzira Yako Yega Yakasarudzika Label Lashes Wholesale ...
Yakasarudzika Yakasarudzika Label Eyelash Bhokisi Bulk Lon ...
Yakasarudzika Siberian Eyelashes Yechokwadi 3d Mink Lashes M ...
Bulk Gadzira Yako Yakavanzika Chinyorwa Chinyorwa Chakaitwa Nat ...
Wholesale Yakagadzirwa nemaoko gobvu Fluffy 3d Mink Lashes ...
3D Mink Eyelashes zvizorwa Wholesale Nhema Min ...
eyeliner, Ziso Lashes, Vatengesi ve Eyelash, Eyelash Kuwedzeredzwa, lipgloss, mink lashes,